Ogaden News Agency (ONA) – Halbeega Hoyga Guusha Inagaa Leh Idam Allah, By Suleebaab.
Halbeega Hoyga Guusha Inagaa Leh Idam Allah, By Suleebaab.
Posted by Dulmane	/ February 19, 2019
Halbeega Hoyga guusha inagaa leh idam Alle. Midaynta Aragtida waa halbawlaha Umadeena.
Inkastoo shanta farood ee Aadmigu sinayn, hadana Hal gacan ayay ku wada yaalaan, taasi oo hankaas ay utaal ku Qurux badan;
Waana Tabta uu Rabbi u Uumay.
Kala duwanaanshaha Aragtida markii loo maaraynayo habka wadajirka wanaaga xanbaarsan waa mid haysan kara Himilada toosan.
Markii loo kuurgalo Bulshooyinka Caalamka ee Natiijo wax ku ool ah kasoo hoyiyay dhinaca Amuuraha horseed ka dhigi kara Bulsho, ayaa iyagu Waxay ku dhaqmaan Masalooyin dhaxal gal unoqda umadooda, taasi oo ay saldhig Ama barbilaw utahay in mudnaanta lasiiyo habka hormarinta mabaa’diida la Isku waafaqsanyahay iyadoo arintaasina uugu danbayn isugusoo Biyo shubata inay meesha ka baxaan waxyaabihii kale ee ay dhici karto in lagu kala duwanaa.
Waa tubta guusha loo maro, waxaan ahay shakhsi waxaana matalaa ummad, iyaguna Si buuxda ayay ii Matalaan waxaana naga dhaxaysa Dano badan marna makala maarano, waxaanuna farta ku fiiqi karnaa cidii wado khaldan haysa.
Waa tusaale wata hab wadajir ah inaan difaacan karno Danaheena iyadoon masuuliyadaas wada dareensanahay.
Waana wadada ay haatan hayso JWXO Si aan ugudano waajibaadkeena masuuliyadeed ee inaga Saaran Umadeena iyo Dhulkeenaba.
Dad iyagu Dano gaar ah leh, Ama fulinaya habraac loo soo yeedhiyay markasta way ku hongoobayaan; maadaama ay baalmarsantahay shuruucda umadaha kala haga ee ay tahay in loogu dhaqmo sida ku haboon.
Balse waxaa xusid mudan in fooshu xanuun leedahay, taasi oo marka Danbena loo aayo imaanshaha wafdiga Saxaada ku Cusub.
Ayaamuhu Waxay ina baraan maalinkasta Cashir Cusub, oo ay tahay inaan Duruustaas u akhrino Bulshadeena markasta, Hoyga Guushana aan uugu hoyano Idam Alle.
Nabi Sulaymaan CS ayaa maalin waxaa uyimid labo Dumar ah Oo Isku haysta Ilmo yar, iyadoo mid kasta ku andacoonaysa inay iyadu dhashay!
Markii lagu Guda jiray xiligii loo kala gar-Qaadayay ayuu Nabigu yidhi Mindi keena waan idiin kala goyne!
Markiiba mid ayaa soo booday oo tidhi waa saxe noo kala jar!
Gabadhii kale ayaa intay naxday soo booday markaas ayay tidhi siiya iyadaa dhashee halkaas ayayna Xukunkii ilmaha lasiiyay Hooyadii oo ay ahayd gabadhan Danbe. Markaa Dadkii noocaas ahaa waxayna dhalin uugu hanqaltaagayay wali way joogaan Dunida guud keeda walaw masaladaas ay Qarniyaal badan ka hor ahayd.
Cabdulaahi Cabdi Ibraahim.